[Hormuud Telecom] oo Internetkeeda ka xanibtay booqashadda timesofIsrael.com ,Canadafreepress.com iyo Sunatimes.com .
Monday October 14, 2019 - 22:02:44 in Wararka by Super Admin
Shirkadda Hormuud Telecom Somalia iyo Shirkadaha la mantaanka ah ee Telesom Somaliland iyo Golis Telecom Puntland ayaa internet-kooda ka xayiray Website-yadii faafiyay Warbixin ilhan Omar oo taageertay Shirkad argagixisadda leedahay.
Website-yadda aan Internetkeeda Somalia laga booqan karin waxaa ka mida TimesofIsrael.com, Canadafreepress.com, Sunatimes.com, intelligencebriefs.com, Waagacusub.com, HCH24.com, PJMedia.com, News.iheart.com, trulytimes.com iyo Judicialwatch.org.
Xafiiska Muqdisho ee Ururka Isu taga Suxufiyiinta Soomaaliyeed ASOJ ayaa cambaareeyay falka caburinta iyo xaqiiqa qarinta ee Hormuud Telecom ku kacday.
Xoghayaha guud ee Ururka ASOJ Mr Abdulkadir Jim’ale ayaa xaqiijiyay iney dhamaan xanibeen booqashadda Website-yadaan 21 September 2019.
Somalia kuma noola Wariye ama Warbaahin faafin karta war ka dhana Hormuud Telecom .
Warbaahinta waxey bil walba siisaa lacag laaluusha sidaas darteed Wariyahii isku daya inuu ka hadlo tacadiyadooda iyo taageeradda ay Al-Shabaab siiyaan markiiba waa la xirayaa ama waa la dilayaa.
Wariye Abdullahi Kalgacal ayey Hormuud Telecom ku xirtay Muqdisho iyadoo xabsiga dhexdiisa loogu geeyay qof dhintay kadibna loo sheegay inuu isaga dilay.
Seddex bil oo jirdil xun lagu sameeyay kadib ayaa Wariye Abdullahi Kalgacal laga sii daayay Xabsiga kadib markii uu aqbalay inuu Shirkadda iidheh u sameeyo.
Wariye Kalgacal wuxuu sameeyay warbixin ku saabsan iney Hormuud telecom dadka u fasaxday adeeg la yiraa EVC Plus oo aan qofka looga baahneeyn inuu aqoonsigiisa ku diiwaangeliyo taas oo dhibaato ku noqotay amniga iyo dadka danyarta ee aan telefoonadda iibsan karin.
DAAWO Dabcasir iyo Dahir Alasow maxaa kala qabsaday dagaalka internetka
Topnews:-Wiilka AxmedNur Jimcale oo furtay Tv uu ka baahin doono Simcard-yada Hormuud Telecom - Nuuc kasta oo Film ah.
DAAWO Habargidirtii laheyd Qoor Qoor waa Libaax iyo Sacadkii run mooday ma ooyeen maanta?
Sarkaal ka tirsan Ciidanka xooga oo Al-Shabaab hubka u gudbiya
Daawo Xaaladda Galmudug oo gaartay in la afduubay Saraakiishii Sacad ee waan waanta loogu yeeray Galkacyo iyo Ciidan beeleedyo Gurmad ah oo buuxiyay Galkacyo
[Daawo Farxadda Nin ku guuleystay] Laba kun oo dollar kadib markii uu ka jawaabay suaalihii ugu adkaa.
[DAAWO] Qaraaxo 12-aad Fanaanadii kobta ula baxday kursi site si ay u garaacdo?
Beesha Sacad oo afka furatay "Qoor Qoor Galkacyo ha keeno wiilka xun ee Al-Shabaabka ah"
Codad sira oo Qoor Qoor hurdada u diiday qeybta 2-aad
DAAWO Sheekh Caana oo sheegay iney Xaaraan tahay lacagta Internetka Somalia laga sameeyo
DAAWO Afhayeenka Duduble oo caayay Gudoomiyaha beesha Dir Dahir Boqore
Daawo Jilaayaal caana oo lacag ku guuleeystay kadib tartanka 10-ka Suaalood -Ceegaag, Cabdiqani iyo Ikran Mahdi Shamaakh